Very Steam ve ny Adobe SiteCatalyst? | Martech Zone
Very Steam ve ny Adobe SiteCatalyst?
Talata, Oktobra 2, 2012 Alakamisy Febroary 25, 2016 Douglas Karr
Manana mpanjifa vitsivitsy ao amin'ny Adobe SiteCatalyst izahay… saingy tsy azoko antoka hoe firy no tena tia ilay sehatra ary firy ny drafitra hitazomana azy. SiteCatalyst, toy ny hafa Analytics sehatra, ferana ny isan'ny fitsidihana hitehirizany ny angon-drakitra - fatiantoka lehibe ho an'izay olona mikohaka amin'ny vola be ho an'ny rafitra orinasa. Ary satria natelin'ny Adobe izy ireo, dia toa tsy orinasa iray ihany.
Nahaliana ahy izany ary nijery fironana fikarohana sasany aho. Rehefa mampiasa sehatra ny prospecta sy ny mpampiasa dia mirona hikaroka azy ireo bebe kokoa izy ireo. Amin'ity tranga ity dia toa mirongatra hatrany ambany ny fikarohana Catalys sy ny Omniture. Tsy isalasalana fa ny Google Analytics no mitsako ireo mpivarotra rehetra ireo - saingy tsy nitovy nandritra ny fotoana kelikely i Omniture. Ny mpiasa matihanina dia mendrika ny fampiasam-bola hatramin'ny nanohizan'izy ireo ny fanampiana ny mpanjifany hitombo. Tsy azoko antoka fa efa nitranga izany.
Ireo mpanolo-tsaina agnostika mpivarotra toa ahy koa angamba tsy manampy. Tsy mampaninona ahy ny miara-miasa amin'ny SiteCatalyst, fa ny mpanjifanay kosa tsy tena manao zavatra mahavariana amin'izany. ChaCha dia nanao fandalinana mahafinaritra tsara araka ny faritry ny pejy mba hahafantaran'izy ireo izay atiny manintona sy mitazona ny ankamaroan'ny mpitsidika… fa na dia izany aza dia azo atao amin'ny Google raha ilaina izany.
SiteCatalyst dia manome fampidirana finday, sosialy ary horonan-tsary matanjaka… fa tsy tena fanamoriana hafa ihany koa io. Ny endri-javatra iray izay mety ho hitan'ny SiteCatalyst ho mpanakalo lalao dia ny fizotran'ny asa:
Fifanarahana mpampiasa mahay mandanjalanja — Manehoa ny fomba fijerin'ny marketing amin'ny Internet haingana sy mora.
Fahafahana amin'ny fotoana tena izy — Fidio angona avy amin'ny iPad-nao. Mikorisa, swipe, ary zahao amin'ny fe-potoana manokana. Manampia metrika vaovao na tatitra mailaka miaraka amina paika tsotra.
Fanapahan-kevitra mandeha ho azy — Mametraha fampandrenesana mandeha ho azy momba ny fitrangan'ny hetsika rehefa mihoatra na latsaka ambany noho ny antenaina ny metrika lehibe.
Inona ny hevitrao? Ianao ve orinasa nandao ny Adobe SiteCatalyst? Ny zavatra an-tsena ve dia ampanjarianao vola? Raha ny fahitako azy dia tsy momba ny lampihazo fotsiny fa bebe kokoa momba ny orinasa manampy anao hahomby. Niara-niasa mivantana tamin'ireo olona tao amin'ny Webtrends aho, fantatro fa tena miahy ny mpanjifany izy ireo. Miara-miasa amin'ireo mpanjifa SiteCatalyst, tsy azoko antoka fa efa niresaka tamin'ny mpitantana kaonty Adobe aho!
Ticksy: Fanohanana tsotra ho an'ny mpanjifa SaaS tsotra
Mitandrema amin'ny famoahana ireo script Google Analytics marobe
Fanamboarana solosaina Portland
2 Okt 2012 amin'ny 2:12 PM
Hamarin-tena aho, heveriko fa very tany marobe i Adobe noho ny olana Adobe Flash. Na dia fantatro aza fa mihetsika lavitra an'ity ny tranonkala, dia mbola betsaka ireo tsy maintsy manatratra. Manana mpampiasa diso fanantenana be dia be ianao any. Na dia tsara aza ny fonosana famolavolana… ny entiko tsapako fa misy akony amin'ny toe-javatra
Oct 16, 2012 amin'ny 7: 03 AM
Fironana hita marimarina izany. Ao amin'ny LVMetrics, izahay dia miara-miasa betsaka amin'ireo mpanjifa izay mahatsapa bebe kokoa ny fahafahan'ny Google Analytics rehefa ampitaina sy ampiasaina tsara. Ny resaka dia tsy momba ny vidiny intsony, toa ny fahatsapana fa tsy misy afa-tsy fampahalalana marobe izay azo alaina avy amin'ny fitaovana Web Analytics ary noho izany, Google Analytics dia miasa tsara. Fampiharana matanjaka dia azo hatsangana amin'ny alàlan'ny Google Analytics API, ao anatin'izany ny famakafakana ny mpitsidika - zavatra izay efa nantsoin'ny Omniture hatrizay ho teboka fivarotana tsy manam-paharoa. Ny safidy dia tena mampirongatra ny fampitahana eo amin'ny endri-javatra 'ivelan'ny boaty' an'ny SC, vs. ny fanarahana GA voafetra + fakan-kevitra, majika angona ary ETL. Nahazo fandresena tanana ity farany.